In nepachinko parlors vari siyana vatengi vave kuuya kuchitoro. Ko munhu neapo kuenda kutamba, asi ndinofunga kuti hazvisi zvikuru iwe basa mutengi chawo, ari nepachinko yokumusoro, vakadzi kazhinji z...
Chii kazhinji Horukon boka configuration of nepachinko yaiitirwa
Boka configuration, pakupindurwa jackpot chiratidzo kubva configuration Hall nerimwe boka achava mumwe kuti kutumbura jackpot. The Strategy pechivanze conserver kubatwa, ndizvo zvave Dasa akafunga. Pa...
Recent nepachinko yokumusoro, sikirini hombe ne muchina anonzi mashoko Lobo, zvitoro kuti iiswe ave mazhinji. The chitoro nechemberi hwomukova uye pakaunda pamberi, nezvimwewo, iri muchina uyu kwave y...
※ inongova mugumonepachinko yokumusoro Ndapota anotaura somunhu kuitika yose indasitiri, ndinofunga ndivo vamwe vanhu vakanga Makanzwa norunyerekupe kuti kwete kunze. Kutaura zvazviri, ndizvozvo. Mugu...
Features - ona kuburikidza nenzira Horukon zvenguva yokuvira nguva
In Horukon kubatwa, Yave kukwanisa kuisa bhora kunze Horukon. Pakati pavo, mukuru naro, zvenguva ezvinhu, ndechokuti low-yakatarwa uye zvitatu mhando varipo. In, pakati yakatarwa, tinoda chii kuenda k...
Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM atsamwa nguva
Muna nepachinko yokumusoro, kuti munofunga kuti kugumbuka pachikuva kazhinji zvakanakisisa. Zvikasadaro, kunge nokuti aizova asinganyimi rokutengesa ose nepachinko yaiitirwa. In, sezvo unconventional ...
Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM chakasimba nguva
Nepachinko muchina jackpot dzinokaroparuka dzose ROM zvakanaka. Kana Minukere simba chokutambudzika ROM, dzakanga mukana kuti givin ari jackpot. Saka, kana pane chepfungwa zvakanaka chokutambudzika RO...
Nepachinko Machine of ROM ndiko, simba nguva, kazhinji nguva, rakakamurwa slump nguva. Zvichienzaniswa yakasimba mwaka nokugumburwa nguva, zvinogona Normal hupenyu kuudza zvakaoma. Dzinenge features, ...
※ uyewo wokupedzisiranepachinko yokumusoro Ndapota kureva sezvo zvinoitwa yose indasitiri nokuti zvokutenga kambani anofanira angabatsira ose zuva. Kana funga zvakadaro, asi ndiyo shanduro kunogonawo ...
General rakazaruka-upenyu nepachinko parlors, inoti-ona kuburikidza nenzira
※ pakupedzisira Ndapota kureva sezvo muitiro ari indasitiri yosenepachinko rinoumbwa mune imwe yemhuka vatengi uye zvitoro kuti kuhwina kana kurasikirwa. Zvisinei, kana iwe nguva dzose kurasikirwa, ne...
Mumakore achangopfuura, nokuti wakabudiswa magazini akawanda nepachinko, mashoko zvava nyore saka kupinda ruoko. Saka, kana munhu akarova nepachinko, kamwe, I think're kuziva nokuona kuti vakaona vano...
Horukon mukuru-chinhu-ona kuburikidza nenzira yokumisa
In Horukon kubatwa, zvinonzi kunge yakaiswa nokupesana. Nepachinko chitoro, kana Uchikome kuti okutengesa chipfuro kuna Horukon, uye vakasununguka ngaaverenge rutapudzo zvazvingava, iwe vanonzi kudzor...
In Horukon kubatwa, zvinonzi akati dzatoparadzira ari jackpot kuburikidza muzvikwata zvisina tsarukano iri nepachinko muchina iri transformer. Saka, zvinonzi vanobudirira Horukon kubatwa, ndinoda kuon...
Kana iwe usingazivi zvakanaka, mumwe nepachinko yokumusoro iri Horukon rino, zvinoita sokuti vamwe vanhu inofungidzirwa kuva pamutemo, zvakadai kure, chepakuvamba hausi muchina kuti chinhu chakadai. T...
Mune makombiyuta, uye okutengesa yakatarwa, ndiye horo conserver kubatwa ndechokuti anogona kudzora payout. Somunhu mudariro yokuziva chikamu ari payout, mukuru-yakatarwa, pakati ezvinhu, zvinonzi pas...
How kuona kuburikidza Hottest nguva nepachinko yaiitirwa
Uye inopisa kana nguva mapazi iwe zvikuru sei nguva, ungave wakanzwa zvakanaka. Gobvu nguva mapazi, zvichienderana mamiriro ari nepachinko yaiitirwa ari nzvimbo uye operative chinzvimbo uye Sales, vac...
Munhu wose kubva nepachinko parlors, yebhizimisi mashoko zviitiko uye zuva, ndinofunga kuti vamwe vanhu vakaenda tsamba. Nekuti zuva nezuva kusvika chinhu na, ndanzwa kuti vanhu vazhinji vari ukasache...
Ndinofunga kuti pane vatengi vanoona nguva dzose here kuenda nepachinko yokumusoro. Vatengi vanenge kuenda vachidzoka zuva Shigeku rutsoka pane mushandi kwakadaro, anonzi vanoitisana mu nepachinko ind...
Kuti kwamuri kuti nepachinko, ndinofunga kuti vamwe vanhu, ndiko kuti kuverenga magazini nepachinko. Mumakore achangopfuura, kwete chete magazini akabhadhara, free bepa, etc. pavanoparidza chiitiko uy...
Kana kugadzwa yemashoko nepachinko yaiitirwa kazhinji Xintai, kana aiwanzoshandisa tafura
Munyika pane zvakawanda ane nepachinko yaiitirwa, asi Xintai uye zvitoro zvitoro uye raishandiswa tafura pakati ndiyo musimboti, pane zvakasiyana-siyana nepachinko parlors. The zviratidzo michina mits...
Kudzidza Unobata nyore kuti zvinoedza kubva mamiriro akaisa nepachinko yokumusoro kwesimba
In nepachinko parlors, yakabudisa chigadzirwa saizvozvo sezvo mamwe maindasitiri, kureva, pane inokurudzirwa muenzaniso. Zvazvichaita kutokurudzira womuenzaniso akasiyana mune nerimwe nepachinko yaiit...
Muna nepachinko parlors, nepachinko muchina chibereko. Nokurongwa nepachinko yaiitirwa pakati yokutevedzera, tichitarisa vemamwe maindasitiri, achava akafanana uri kuratidza nhumbi. Muna nepachinko yo...
Kuti uone kana muenzaniso kuhwina kubva nepachinko muchina uchishandisa mamiriro
Models kukurumbira pakati nepachinko, hapana muenzaniso. Zviri pachena, asi chii yakawanda vatengi kuti muenzaniso Popular vanogara. Saka, achangopera kuoneka paakapinda nepachinko chitoro, ndinofunga...
Labor mari ndiwo kazhinji nepachinko yokumusoro Zvakaoma rutapudzo kuti mutengi
■ Chii kutangapashure zvose nepachinko yokumusoro shure management, uye zvinoderedza bhora kubva kutengesa, ndokusaka ari zvinodiwa boka kubvisa akasiyana-siyana mari.Nemamwe mashoko, kana kushandisa ...
Mail kubva nepachinko yokumusoro anobatsira tafura kusarudza
In nepachinko parlors, yava akatuma bhizimisi e-mail zuva sezvo uchishandisa mabasa. E-mail ndiyo chikamu, mangwanani akazaruka pamberi uye zvemasikati, uye rava vazhinji nepachinko yokumusoro kutumir...
Mail kubva nepachinko yokumusoro maturo ari tafura kusarudza
Uri, mune zvebhizimisi e-mail ane nepachinko yaiitirwa, kana ndiye kugutsikana ose nguva, ndinofunga kuti pane zvakawanda iwe kugamuchira shoko kuti vanofunga kuti hazvina kubatsira chaizvo. Muna nepa...
Musiyano basa mutemo nokuda nzvimbo nepachinko yaiitirwa (Station Agents & Suburban zvitoro)
chitoro Chero, ndinofunga kuti ndiyo kuita bhizimisi siyana namano kubudikidza nzvimbo ezvinhu. Nepachinko hapana kunze, tine matanho akasiyana-siyana uye siyana, bhizimisi uye kuita kwavo chitoro muf...
※ neyokushandisa ave kuitika yose indasitiri vayanepachinko Favorite Please kureva kuti, ave zvakare vanhu vaunoziva, kukwikwidzana mune nepachinko yokumusoro iri pezana romwedzi inokurudzirwa zvikuru...
Nepachinko mienzaniso kusarudza mukurwa manyorerwo uye Specs
The nepachinko Machine, pane chinhu inonzi spec. Spec uye ari Numeric ukoshi kuti unomirira mukana yacho jackpot. Nepachinko of nokurondedzerwa, achaiswa Classified kupinda marudzi mikuru mitatu. On t...
Muna nepachinko yokumusoro, chichagamuchirwa kukamurwa muchitoro kuratidza chido zvitoro uye kupera kwevhiki kuti kuratidza kukurudzira pamusoro mevhiki. In chete nepachinko parlors, nei musiyano akad...
Nepachinko yokumusoro mari mu pfachura michina Zvakaoma rutapudzo kuti mutengi
Nepachinko yokumusoro of Regional zviri (musiyano bhizimisi gwara maererano dzomumaguta uye kumaruwa)
Sezvo nepachinko yokumusoro iri uyewo zvokutenga kambani, kwete zvitoro vechokwadi achangobva akunda vatengi. Naizvozvo, dzimwe maindasitiri pamwe, tiri kushanda nomumwe chitoro okutengesa itsika. Pan...
Muri, ndakaenda nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti pakusarudza mutambo mienzaniso kutarira kutanga panguva yose chitoro. Saka, kana ukaedza kuhwina zviri, kana ndirege kuridza chero yokutevedzera,...
Normal bhizimisi panguva pachikuva kusarudza munhu nepachinko yokumusoro
Tsvaka kuti nechokwadi kusiya kuchikuva ndiko Inyaya hazviiti asi, kuti kudzivirira pfachura Investments, mashoko uye zvipikiri ndiyo nzvimbo uchida kuona. In, ari tafura kusarudza panguva dzose mabhi...
Ona kubudikidza boka configuration pamusoro Horukon ari nepachinko yokumusoro
Shoko nepachinko neboka configuration, kazhinji kazhinji kuti ausingazivi Kana uri iwe mafaro nepachinko, haufaniri kuwana rubatsiro yako asi akati boka configuration pachayo haina chaizvoizvo. Sezvo ...
Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [chipikiri kuchinja uye nezvipikiri Zvak ed.]
Kana kazhinji akaenda kutamba ari nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti tichaona wokutanga chinangwa aiva muenzaniso mumwe chete. Saka, ndiwo chipikiri kugadziridzwa kuti ndinoda kuziva. Chipikiri ku...
Ongorora mamiriro-muitiro nepachinko yaiitirwa [Horukon Set Operations]
Kana yakawanda vanhu vakaenda kutamba ari nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti kutarisa umboo ari date rambi. Kana musingadi kutarira data, umo kuchikuva ndizvo kuyerera mhando, haazvizivi auya naye...
Raparadza kwacho wavers pakati tariro uye kutya uye asingauyi rova ??uyewo, ndinofunga kuti ndiyo nepachinko chaiyo mafaro. Zvisinei, kana raparadza ndiko, kuti zvimwe zvinhu anotaura Chang, kana usin...
Ongorora yokutsiva kumhanya Xintai pamusoro nepachinko yaiitirwa
Noumwe nguva ari nepachinko yokumusoro kwakafanana chiitiko guru Achitaura yokutsiva Xintai, zvakanga zvaitika pamwero waiita vanenge kamwe imwe kana mwedzi mishomanana nomwedzi. Pari hapana shanduko ...
※ Kana wanga kungotaura vakajaira kuenda sezvinoita kuitika yose indasitiri kufadzanepachinko yokumusoro iri reference, asi handina kunge wakacherechedza, ari nepachinko yokumusoro, uye nguva uye nyor...
Muri sei asimbise guru raparadza iri nepachinko mukati, ndinofunga kuti vakawanda vevaya vari akarova pasina kufunga zvakawanda. Nepachinko Machine, iro zvino kuiswa mune nepachinko yokumusoro iri, is...
The nepachinko muchina, nguva dzose vakatasva ROM. Saka, chii chinhu nokuda kana ari ROM mhando, ndinoda kutora Kutarira sei zvinoshanda. Nekuti ROM ndiko, kana kuziva jackpot, kuti rine hurongwa, aka...
Imhandoi nepachinko chitoro kana kutokurudzira kuita chiitiko, tichakurukura kuti Katore apo zvikaonekwa.■ mwedzi mumwe chiratidzo chiitikoChokutanga, ari nepachinko yokumusoro, iyo akabata chiratidzo...
Table kusarudza panguva nepachinko parlors chiitiko
Nepachinko yokumusoro shure panguva chacho chinenge tinotova nomufananidzo chenyaya hombe, asi hapana chinhu chakadaro. Nguva dzose kupora tafura kunyange panguva chacho aripo. Chokwadi, sezvo rakaiti...
tafura nepachinko chitoro kusarudza panguva kuvhurazve
Pazuva rokutanga yokutsiva Xintai, nemashoko zviri haanawo, nokuti mashoko wehurumende hapana, kuna Neraiuchi kusarudza kuchikuva chinhu chakaoma. Xintai zuva rokutanga, hazvirevi kuti pabani kubva ma...
Old nepachinko ndiko, vamwe vanhu kuti vakanaka kutamba akanga nyore kunyange pasina zvakawanda zviri mubhizimisi. Recent nepachinko ndiko, kubhejera rakasimba kwazvo, akagadzirira kunyangarika mumami...
Win sei Hanemono-Dejihane (zvinhu road)
Recent nepachinko, sezvo Seven muchina rava musoro, ndinofunga kuti kupinda kunyange vaya vasingazivi kuchinzi Hanemono. Vamwe vaya vanoziva, Hanemono kuva zvishoma payout, zvingava vamwe vanhu vanofu...
In patafura chiitiko, ichokwadi kuti kunyange nepachinko parlors inofungidzirwa zvichida kupa mu kupfuura dzose. Zvisinei, izvozvo zvinoreva kuti kuchikuva yose kuchinja kwakadaro haisi Ichokwadi. In,...
Zvakanakira nekuipira aiming muenzaniso zvidukuduku nepachinko parlors
Kunyange nepachinko yokumusoro kuti vaende kwamuri, ndinofunga kuti pane nguva dzose akanyanya kunaka kwete muenzaniso zviduku kushanda. Zvikurukuru kana zvaiswa kurutivi chitoro ari shure, nhamba iri...
Zvakanakira nekuipira aiming munhu billboard muenzaniso nepachinko yaiitirwa
Signboard yokutevedzera, ndinoda kutamba zvikuru vatengi vari nepachinko yokumusoro, 's vanotaurwa chigadzirwa. Signboard yokutevedzera, asi zvakasiyana ne mumwe chitoro, isu kazhinji pane mienzaniso ...
Zvakanakira nekuipira aiming siyana pakona ari nepachinko yokumusoro
Mumakore achangopfuura, tine ichiwedzera nepachinko parlors hwokugadza siyana wekona. Kazhinji, isu makasimbisa parutivi mashoma vamapoka chete womuenzaniso, muna Variety pakona, uyewo akagadza yakasi...
Kana ukaenda kuna nepachinko uye slots, kutanga ndinofunga kuti ndicho kutendeuka nhamba mwoyo. Common ari nepachinko yokumusoro, kuwanda bhora apo vanokweretesawo vatengi, mumwe 4 Yen, rava rimwe 20 ...
Zvakanakira nekuipira kuti kusarudza yakakwirira kukwanisa Utilisation nepachinko yokumusoro
Munhu wese ari, nezve kusarudza nepachinko zvitoro, mhepo uye basa payout uye zvitoro, nezvimwewo, ndinofunga kuti siyana ikoko, asi uchishandisa mamiriro kana uchida kubatsirwa nengaidzo achava pfung...
Nhambo Ini akazarura musuo nepachinko yaiitirwa, azere chiro tafura, imi makanga rira wenyika, uye izvi shop'll kuchengeta chemabhazi, ndinofunga kuti pane vazhinji havanzwi raparadza. Inotarisira mug...
Muna nepachinko yokumusoro, etc. pamberi chiteshi, unogona zvakare kuridza Ivepo akabudiswa pakarepo mushure Xintai. In, zvakanakira nekuipira aiming munhu Xintai akadaro, tichakurukura chikamu ipi. K...
Pane nepachinko nzvimbo kuti mashoko Lobo nzvimbo Seven. Saizvozvo sezvo P-WORLD kuti maindasitiri mashoko nzvimbo, unogona kuona dzakadai kunotsvaka muenzaniso mashoko uye nepachinko imba, zvakasiyan...
Nani kuti nepachinko ndechokuti, ndinofunga tiri vazhinji vari kushandisa peji-nyika. A vakasununguka nzvimbo, saka munhu anogona kuonekwa nyore, ndiko kuunganidza ruzivo vava chinokosha nzvimbo.Mungu...